The Wise and Foolish | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on June 3, 2014
Posted in: ရသစာပေ.	Tagged: ငတုံး, လူအ, အရူး, Fool, Foolish.	Leaveacomment
တစ်ခါ က ဈေးတစ်ခုမှာ လူနုံ လူအ တစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ အဲဒီ လူနုံကို ဈေးသူဈေးသားတွေက အမြဲတမ်း စနောက်နေတတ်ကြတယ်။ သူတို့ အမြဲတမ်းစနေတဲ့ နည်းကတော့ လက်ဝါးပေါ်မှာ ၁၀ တန်းနဲ့ ၂၀ ဆယ် တန်ကို တင်ပြီး အဲဒီ နုံနုံ အအ လူကို ရွှေးခိုင်းစေသတဲ့။ အမြဲတမ်း အဲဒီလူနုံက ၁၀ ဆယ် တန်းကို ပဲ ရွှေးသတဲ့။၁၀ တန်နဲ့ ၂၀ ဆယ်တန် တန်ဖိုးပိုရှိတဲ့ ၂၀ တန်ကို မယူပဲ ၁၀ တန်ကိုပဲ ယူတဲ့အတွက် ဒီလူတော်တော် နုံတာပဲ တုံးတာပဲ လို့ ပျက်ရယ်ပြု ၀ိုင်းစကြသတဲ့။ ဒါကို လူတွေက ဒီလူတော်တော် နုံတာပဲ ဟ.. ဆိုပြီး အမြဲ တမ်း အဲဒီ အတိုင်းစနောက်ကြသတဲ့။ တစ်နေ့ တော့ လူတစ်ယောက်က မနေနိုင်တော့ဘူး။ တစ်နေ့တော့ လူတစ်ယောက်က အဲဒီ လူနုံကို သိလိုစိတ်နဲ့မေးလိုက်တယ်။
“ခင်ဗျား တကယ်ပဲ ဆယ်တန် နဲ့ နှစ်ဆယ်တန်ကို မခွဲတတ်ဘူးလား၊”
အဲဒီအခါ လူနုံလို့ ပြောခံရတဲ့ သူကပြုံးပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
“တကယ်လို့သာ ကျွန်တော် နှစ်ဆယ်တန်ကို ယူလိုက်ရင် နောက်တစ်ခါ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလို မစကြတော့ဘူးဗျ ” တဲ့။
ဒီ ပုံပြင်လေးမှာ ဘာရသွားသလဲ ဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေ လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လည်တယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငတုံး ငအ ဖြစ်နေတာ ကို သတိမထားမိတတ်ကြဘူး။ ဘရာဇီ သားတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားရှိတယ်။ ” လူနုံလူအတွေက ပိုက်ဆံပေးပြီးသင်ယူတယ်။ လူတော်တွေက အဲဒီလူနုံလူအတွေရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ပြန်သင်ယူတယ် ” တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် တော်လှပြီလို ထင်နေပေမယ် တစ်ခါတရံ လူနုံတွေဖြစ်နေကြပြီး လူနုံလို့ အများက ထင်မြင်နေကြတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ခါတရံမှာ လူတော်တွေဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူများကို တုံးတယ် လို့ ပြောချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လူလည် ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ပြန်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
(တပါးသူအား နှိမ်ခြင်း လှောင်ပြောင်ခြင်းမှ ကင်းကြပါစေ။)
← ပလေတို နှင့် ဆိုကရေးတီး